किन ट्रान्सजेंडर 21 शताब्दीको लागि नयाँ मानक हुन्छ र विषमलैंगिक गायब हुन्छ: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	12 अगस्ट 2019 मा	• 22 टिप्पणिहरु
यो विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, तर विपरीत लिx्गी मानिस अन्त्य हुनेवाला छ। किनभने यो प्राकृतिक प्रक्रियाहरूबाट हुँदै जान्छ र पुरुष र महिला अब उप्रान्त जन्मिनेछैन, तर जैव प्रौद्योगिकी र रासायनिक प्रभावले यस प्रक्रियालाई गति दिनेछ। शुक्राणु उत्पादन विश्वव्यापी मापन गरिएको तथ्य आफैंमा विशेष हो, तर दोस्रो तथ्य यो मापनले ठूलो गिरावट देखाउँदछ यसले समाजमा औसत टेस्टोस्टेरोनको स्तरको बारेमा कुरा गर्छ र यसैले सामान्यतया पुरूषत्वमा कमी आएको छ। । "1973 र 2011 बीच, शुक्राणु कोषहरूको संख्या घट्यो 59,3% सँग भर्खरको बर्षहरूमा 'चाप्लिएको' को प्रमाण बिना।"धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूका अनुसन्धानकर्ताहरू लेखे तिनीहरूको रिपोर्ट मा.
त्यहाँ यस्तो आवाजहरू पनि छन् कि वातावरणमा प्लास्टिकहरू गर्भवती महिलाहरूको रगतमा समाप्त हुन्छन् र भ्रुणमा टेस्टोस्टेरोन encapsulate, पुरुषत्वको विकास रोक्न (हेर्नुहोस्) यहाँ).
IVF त्यस्तो क्षण देखिन्छ जहाँ स्टेम सेलको स्रोत कोड परिमार्जन गर्न सकिन्छ र सम्बद्ध हार्मोन उपचार सम्भवतः सेक्सलाई निश्चित दिशामा बढाउने सेवा दिन सक्छ। आईयूआई (इंट्रा-गर्भाशय इन्सेमिशन) को साथ शुक्राणु कोशिकाहरू पहिलो पटक प्रयोगशालामा प्रशोधन गरिन्छ र "सिधै ठीक समयमा" सिधै गर्भमा रहेको ट्यूबको साथ। हामी अन्धाधुन्ध रूपमा यी सबै गर्भाधान विधिहरूमा विश्वास गर्दछौं, तर प्रयोगशालाको कामको क्रममा के हुन्छ? मेरो शंकाले भन्छ कि प्राकृतिक प्रजननमा मानव हस्तक्षेपले विपरित लि for्गको लागि यौन प्राथमिकता भएका व्यक्तिको स in्ख्यामा विस्फोट सिर्जना गर्न र लै increasing्गिक भ्रम बढाउनको लागि ठाउँ सिर्जना गरेको छ। यो वातावरणमा प्लास्टिकको रासायनिक प्रभाव बाहेक र खोपहरूको प्रभावको हुन सक्ने सम्भावनाको अतिरिक्त छ।
राजनीति पहिले नै संगीतभन्दा अगाडि छ र ट्रान्सजेंडर र लि gender्ग कन्फ्युजनलाई एजेन्डामा उच्च राख्दै छन्, जसले गर्दा प्राथमिक विद्यालयहरूमा बच्चाहरू अब यौन शिक्षा प्राप्त गर्दछन् र जान्छन् कि उनीहरूको लि gender्ग आवश्यक छैन कि उनीहरूको जन्म जननेन्द्रिय द्वारा निर्धारण गरिन्छ। तर त्यो उनीहरू अझै पनि आफ्नो लि choose्ग छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं चालीस वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्छ भने, तपाईंले याद गर्नुभएकै होला, जस्तो कि एलि लस्ट वा एलेन डेजेनेरेस (के नाममा हो) विगतका भन्दा हिंड्ने महिलाहरूको प्रकार, तर बढी 'महिला केटाहरू' पनि। स्पष्ट हुनुपर्दछ: मेरो मतलब यो आपत्तिजनक वा अपमानजनक होइन, तर म केवल शारीरिक विशेषताहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु। यी शारीरिक सुविधाहरू केहि दशक अघि बढी स्पष्ट रूपमा पुल्लिंगी वा स्त्री थियो र यस्तो स्पष्ट भिन्नता बन्द हुँदैछ जस्तो देखिन्छ।
म कहिलेकाँहि सोच्दछु कि स्वास्थ्य सल्लाहकार र आनुवांशिक विशेषज्ञका पूर्व सल्लाहकार हो रोनाल्ड प्लास्टरक स्पष्ट लि gender्ग तटस्थताको यस प्रक्रियामा एक महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ। मेरो थीसिस यो हो कि हामी लै gender्गिक तटस्थताको सचेत प्रक्रियाको साक्षीरहेका छौं, किनकि हामी लामो योजनाबद्ध लक्ष्यमा गइरहेका छौं, जहाँ इन्द्रेणीको प्रतीकवादले स्पष्ट प्रतीकको रूपमा म ठीक हुँ भनेर स ind्केत दिन्छ।
जे भए पनि, इन्द्रेणी एलजीबीटीआई समुदायको केन्द्रमा रहेको छ, जुन समुदायले समलि .्गी परेड एम्स्टर्डममा कडा प्रचार गरिएको छ, जसलाई हालैका वर्षहरूमा गुलाबीबाट इन्द्रेणीमा परिवर्तन गरिएको छ र 'समलि Gay्गी परेड' बाट 'गर्व'। हामी मिडियामा "समानता" वा "मानव अधिकार" भन्ने शब्दको कभर अन्तर्गत इन्द्रधनुष प्रचार प्रसार पनि देख्छौं। यी सबै इन्द्रेणीको सजावट, इन्द्रेणी पेडेस्ट्रियन क्रसिंग, इन्द्रेणी फायर इन्जिन, इन्द्रेणी ग्यास स्टेशन र अन्य मा पाउन सकिन्छ। इन्द्रेणी "सबै र colors्ग बराबर" को प्रतीक जस्तो देखिन्छ; कम से कम त्यो कसरी ल्याइएको छ। यो विचार हो कि तपाईंको छालाको र color र यौन प्राथमिकताले फरक पार्दैन र सबै बराबर छन्। गहिरो विचार, तथापि, बाढी र पुरातन मानवता को उन्मूलन को बाइबलीय कथा संग गर्न छ। यति ठूलो बाढीको बारेमा कथाहरू विश्वव्यापी रूपमा सबै पुरानो संस्कृतिहरूमा फेला पार्न सकिन्छ।
इन्द्रेणीले बाइबलबाट परमेश्वरको सृष्टिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। वेबसाइटमा यहाँ गरिएको मेरो विश्लेषणको परिणामस्वरूप बाइबलको परमेश्वर र अन्य धर्महरूका परमेश्वर वास्तवमा हामी बाँचिरहनुभएको दोहोर अनुकरणको निर्माता हुनुहुन्छ (जुन हामी अवलोकन गर्छौं)। त्यो तपाईंलाई अनौंठो लाग्न सक्छ, तर यदि तपाईंले विगत हप्ताहरूको लेख अध्ययन गर्नुभयो वा 'शीर्षक अन्तर्गत मेनूमा जानु भयो भने।नक्कल'यो सबै थोरै स्पष्ट हुन्छ (वैज्ञानिक substantiation मार्फत सहित)।
सृष्टि कहानी, विकासको सिद्धान्त र इतिहास जसरी हामीलाई यो थाहा छ, सिमुलेसन मोडेललाई पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दछ यदि यदि हामी बुझ्छौं कि तपाईं ईतिहासबाटaदेखि z सम्म सिमुलेसन प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ भने। यदि खेल निर्माणकर्ताले एक अनलाइन बहु-खेलाडी खेल बनाउँछ भने, यसले पनि ईतिहास पनि समावेश गर्दछ। त्यो एक मिलियन वर्ष पुरानो ईतिहास हुन सक्छ जुन "वास्तवमै अवस्थित" हुन्छ जब तपाइँ खेल सुरु गर्नुहुन्छ। दिन र रात, हावा, पृथ्वी, जनावरहरू, व्यक्तिहरू बीचको भिन्नताको सिर्जना पनि सिमुलेशन निर्माणको विचारसँग पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ। ठूलो ब्या bang भनेको खेलको सुरूवात बिन्दुको लागि 'खेल स्तरबाट' मात्र व्याख्या हुन्छ। त्यसोभए त्यो बाइबलले एउटा ठूलो बाढीको कुरा गर्छ जसमा परमेश्वरले मानिसजातिलाई बगाउनुभयो र एउटा जहाज जुन 1 व्यक्तिले सबै डीएनए सुरक्षित राख्नुभयो, त्यसोभए, नयाँ पुनः सुरु गर्न, त्यसोभए त्यो फेरि आउनेछ। हामी सबैलाई थाहा छ कि इन्द्रेणी त्यो ठूलो बाढीको प्रतीक थियो।
इन्द्रेणी यसैले जस्तै यो थियो, "पुरानो सृष्टि" र मानवतालाई मेटाउन प्रतीक जस्तै यो पुनः सुरु गर्नु थियो। हामी पनि अहिले यस्तै नयाँ सुरुमा छौं। धार्मिक व्यक्तिहरू (इसाईहरू, तर मुस्लिम पनि) सोच्दछन् कि ट्रांसजेंडरिजम, जुन हामीले अहिले इन्द्रेणीको झण्डा मुनि देख्न सक्छौं, यो बाफोमेट (जुन सही छ) को प्रतीक हो र त्यसैले शैतानको लागि (जुन सही छैन)। त्यो गलतफहमी स्पष्ट गर्नुपर्दछ। बायफोमेट, उभयलिंगी (हर्माफ्रोडाइट) बाख्रा, शैतानको प्रतीक होइन, तर लुसिफरको प्रतीक हो। लुसिफरलाई आउँदो अन्तिम3विश्व युद्ध पछि सबै धर्महरूको केन्द्रीय गढीले घोषणा गर्नेछ, जुन सम्भवतः यरूशलेममा बसोबास गर्नेछ। लुसिफर (मेरो विचारमा) यो सिमुलेशनको निर्माणकर्ता हो र यसैले यो द्वैतवादी सिमुलेशनको निर्माताको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ, जहाँ धर्ममा विरोधाभास र राजनीतिमा विरोधाभास र समाजका अन्य सबै पक्षहरूले यस नक्कलको दोहोरो मोडेलको सेवा गर्छन्। परमेश्वर - शैतानको नमूना (द्वैयवाद) राम्रो र नराम्रो को भेष मा लुसिफर छ; जस्तै क्रिष्ट र एन्टि-क्रिष्ट अवधारणा।
अब हामी त्यस क्षणको पूर्व संध्यामा छौं जब लिपिको अन्तिम भागलाई प्रमुख धर्महरूमा मान्यता दिइनेछ कार्यान्वयन भइरहेको छ। स्क्रिप्टको सुरूवात उत्पत्ति 1: 27:
यसकारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरुपमा सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरकै स्वरूपमा उसलाई सृष्टि गर्नुभयो; नर र नारी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो।
हामी नयाँ "महान बाढी" को पूर्व संध्यामा छौं, जहाँ पुरानो मानवता बगेर जान्छ। हामी त्यस क्षणको पूर्व संध्यामा छौं जब पुरुष र महिला हराउँदैछन्। हामी लिपिको अन्ततिर गइरहेका छौं, जहाँ डुअलिजमले चाहेको दिशामा हालको प्रवाहमा पुर्‍याउँदछ, जस्तै ब्याट्रीको प्लस र माइनस ध्रुवहरूले प्रत्यक्ष प्रवाह उत्पन्न गर्दछ। त्यो समय आइसकेको छ कि द्वैतवाद शरीरमा मर्ज हुनेछ, ताकि पुरुष-महिला सम्बन्धको सम्बन्ध र भावनात्मक समस्याहरू अब एक दिमागमा हुनेछन्। हामी लिपिको पूर्तिको प्रतीकको रूपमा हर्मेफ्रोडाइट (उभयलिंगी) मानवमा जान्छौं, जहाँ मानवतामा आधारित स्वतन्त्र इच्छाको व्यवस्था द्वैतिक स्ट्रिममा अन्त्य भयो र स्वेच्छाले लिपि अनुसरण गर्‍यो (यद्यपि छल र छल द्वारा अन्धा भएका)। त्यसैले हामी यस सिमुलेशनको निर्माणकर्ताको प्रतीकको रूपमा 'लिंग-तटस्थ' (उभयलिंगी) मानवमा जान्छौं: लुसिफर। यस सिमुलेशनको त्यो निर्माणकर्ताले मानवतालाई मेटाइसकेका छन (ठूलो गेम स्क्रिप्टको एक भागको रूपमा) र अब पुरुषलाई एक महिला-पुरुष अवधारणाको रूपमा मिटाउँदैछ। यसैले इन्द्रेणी भनेको LGBTI समुदाय को प्रतीक हो।
यो केवल सुरूवात हो, किनकि सम्पूर्ण "सृष्टि" (वा सिमुलेसन हामी जान्दछौं) पनि मेटाइनेछ। यो कुनै कुराको लागि होइन कि वातावरण मानिसजातिलाई अझ थप आर्थिक (करहरू मार्फत) राख्नका लागि हो र यसै बीचमा पृथ्वीको विनाश मात्र चर्किरहेको छ। पृथ्वी सचेतपूर्वक अपरिवर्तनीय बनाइएको छ, ताकि मानवजाति धर्मबाट 'नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी' अवधारणा को लागी तयार छ। स्वास्थ्य र वातावरणको विनाशले मानवजातिलाई (टाढा व्यवहार्य ग्रहहरूको प्रलोभनको अतिरिक्त) transhumanization को बाटो अपनाउन लुक्नु पर्छ। आउँदो वर्षहरु मा हामी केवल ट्रान्सजेंडर मानिस मा परिणत हुनेछ, तर पनि androids मा। थप रूपमा, अल्जाइमर र डिमेन्शियालाई सुल्झाउने, तर साथै अंगहरू प्रतिस्थापन गर्ने वा अन्धालाई फेरि देख्ने बनाउने जस्ता मुद्दाहरू सम्बन्धित प्राविधिक घटनाहरूलाई अँगाल्ने पहिलो ट्रिगर हुन्। In यो लेख मैले अहिले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने छाप दिएँ र तपाईले एलोन मस्कको कम्पनी न्युरालिinkकको प्रस्तुतीकरण पाउनुहुनेछ, जहाँबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि हामी अब मानव र एआईआईको मर्जरको दह्रो भागबाट टाढा छैनौं।
म्यानकाइन्ड (मानव अवतार, जो वास्तवमा उनको वास्तविकताबाट प्रेरित छ जुन यस सिमुलेशन बाहिर छ) यस "सृष्टि" लाई ट्रान्सजेन्डर ट्रान्सहुमानको रूपमा छोड्नेछ, लुसिफेरियन एआईमा समाहित हुने अन्तिम लक्ष्यको साथ। यो प्रक्रिया एक तर्फ प्रलोभनको माध्यमबाट हुनेछ (रोगहरू हटाउने, अन्धोपनलाई सुल्झाउने, बुढ्यौली प्रक्रिया रोक्न) र अर्कोतर्फ पृथ्वी र यसको जीवनको गुणस्तरलाई नष्ट गरेर।
मसीह अवतार (द्वैतवादी लिपिको भाग) जस्तै क्रिष्ट-विरोधी अवतार यस अनुकरणमा मात्र एउटा इनपुट हुन्छ जसले मानिसलाई 'नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी' र 'अनन्त जीवन'तर्फ आकर्षित गर्दछ। transhumanism को अमरत्व)। यो सबै एक पटक तपाईंले यस मार्फत देख्नुहुन्छ सबै ठाउँमा खस्छ। यो प्रक्रिया आउँदै गरेको2दशकहरूमा हुने अनुमान गरिएको छ (किनकि यसले धार्मिक भविष्यवाणीहरू र टेक्नोलोजिकल एक्सपोनेन्शल ग्रोथ दुवैमा फिट राख्छ) र यसैले सबै माध्यमहरू एक पुस्ता भित्र हर्मेफ्रोडाइट मानिसलाई महसुस गर्न लगाईनेछ। खोपले सम्भवतः यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र हामी धेरै चाँडै अनुभव गर्नेछौं कि विश्वव्यापी रूपमा खोपहरू अनिवार्य हुनेछन्। यो सबै पाठ्यक्रमको साथ साकार हुनेछ जुन मानव जीनोममा स्टेम सेल जानकारीको ज्ञान छ, तर मेरो शंका यो हो कि हर्मेफ्रोडाइट्स पहिले नै छन्। हाम्रो वरिपरि र यो कि आनुवंशिक परिमार्जन को माध्यम बाट प्राप्त गर्न टेक्नोलोजी पहिले नै तयार छ।
तपाई पढ्नुहुन्छ यो लेख फेरि फेला पार्न कि कसरी सरकारहरू डाटाबेसमा प्रत्येक व्यक्तिको DNA लिन चाहन्छन् र खोजी गर्न सक्छन् यो लेख कुन विधिहरू जनतामा खोप कानून बनाउन प्रयोग गरिन्छ। In यो लेख मँ भन्छु कि 5G नेटवर्क कसरी मानवता को transhumanization को गति को लागी रोल अप हुन्छ। सबै प्रविधि एजेन्डा महसुस गर्न को लागी छ। यो समय हो कि तपाईं साँच्चिकै यसमा राम्रोसँग जान सक्नुहुन्छ र सोच्नुहुन्न कि यो छिटो जान सक्दैन। किन? किनकि यो अन्तिम दासत्वको लागि एजेन्डा हो र तपाईं पनी पनि आफ्नो मूल बाट टाढा.
स्रोत लिङ्क सूची: businessinsider.com, showieuws.nl
DWDD, VI, वैन ड्रेस गिपिप र डेक्ससेन र स्पिलबेकबाट VTM पत्रकार Boudewijn को रूपान्तरण गर्न बो
ट्याग: baphomet, विशेष, लिङ्ग, हेरफेरोडाइट, लुगेरिया, तटस्थ, नयाँ, आदर्श, प्लास्टरक, प्रचार, इंद्रधनुष, रोनाल्ड, शनिन, ट्रान्सगेंडर, transhumanism
12 अगस्ट 2019 मा 09: 43
सामग्री को विषय मा एक राम्रो लेख र धेरै शैक्षिक। म आफैंमा श in्का गर्छु कि बाइबलमा परमेश्वर (एलोहिम वा देवताहरू), अरुहरु मध्येका, वैज्ञानिकहरु (टुटल) पुजारीहरू थिए र तिनीहरू आफैंले आनुवंशिक तवरले हेरफेर गरिएको मानवोइडहरू थिए जो तिनीहरूको सभ्यताको विनाशबाट बचेका थिए। म विश्वास गर्दछु कि हामीले भगवानलाई लुसिफेरिक ट्रान्सेंडन्ट इकाईको रूपमा हेर्नु हुँदैन। हामी सम्भवत तिनीहरूको जेनेटिकली हेरफेर प्राणीहरू हौं र तिनीहरू यसको लागि जिम्मेवार छन्। ती देवताहरूले आफ्ना सृष्टिकर्तासँग आफूले चाहेको कुरा गर्छन्।
मलाई लाग्छ श्री एप्सिन बस जीवित छन् र सम्पूर्ण सर्कस मुख्यतया दुई चीजको लागि हो। नियन्त्रित वैकल्पिक मिडियाका रिपोर्टहरूलाई 'प्रमाणित' नक्कलीको रूपमा राख्न र उनीहरूका सबै समर्थकहरूलाई सम्भावित आतंकवादी र मुर्खहरूको रूपमा चिन्ह लगाउन सक्षम हुन। र वास्तवमा ब्यबस्थापन र स्वीकृति लिनको लागि मानिसहरूमा 'पेडोफिलिया' को अवधारणा लंगर गर्न को लागी यो एक 'सामान्य' यौन झुकाव हो।
12 अगस्ट 2019 मा 11: 32
यस महान लेखको लागि फेरि धन्यवाद!
तपाइँ इन्द्रधनुषसँग प्रतीकको रूपमा र नूहको कथाको बाढीसँगको तुलनाको साथ कत्ति शानदार लिंक बनाउनुहुन्छ। यस्तो प्रकारको ब्रान्डिंग 'बढाउने वास्तविकता' को लागि जुन क्लब यति नराम्रा रूपमा लागू गर्न चाहन्छ।
एफबीमा त्यहाँ पहिले नै धेरै समूहहरू छन् जसले पत्ता लगाएका छन् कि 'बाढी' भर्खर मात्र भएको छ; 1850 वरपर मड्डफ्लडहरू भनेर चिनिन्छ; जहाँ पुरानो संसार सुन्दर ढ free्गले निःशुल्क ऊर्जा र उच्च नैतिक नैतिक प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको थियो; निर्देशित उर्जा हतियारहरूद्वारा गहिरो माटोमा राखिएको थियो। यो एक विशाल अपरेसन थियो; सबै कुरा नष्ट गर्नुहोस्; युद्धहरू, अनाथालयहरू बच्चाहरू पूर्ण भरिपूर्ण थियो जसले चीजहरू कहिँ बनाउनु पर्छ। सबैलाई तेल, ग्यास र पावर प्लान्टमा राख्नुहोस्, जब कि एलिट अझै माफिया विज्ञानले अस्वीकार गरेको 'एथर' बाट प्राप्त गर्दछ।
त्यसोभए तिनीहरू धनी र शक्तिशाली भए, तिनीहरूको सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरे जसले गर्दा सबै दास बने, भ्याटिकन सिटीमा3केन्द्रहरूसहित (यो सबै इटालीमा जेनोवामा पहिलो बैंक "जर्ज" सँग शुरू भयो), लन्डन शहर र वाशिंगटन डीसी, पहिले सबै चीजहरू चोर्न अघि जेसुइट्स मार्फत टेम्पलरहरू सहित। यी3अन्ततः 'उनीहरूको' देशमा सारिनेछ; इशेल। मा पवित्र ट्रिनिटी ...
यो एक जटिल कथा हो, तर लक्ष्य शुरूबाट विश्व प्रभुत्व थियो। र यो प्रविधि लामो समयदेखि राम्रोसँग परिचित छ, तर अब यसलाई विस्तारपूर्वक कार्यान्वयन भइरहेको छ।
यो डरलाग्दो छ जब तपाईं उदाहरण को लागी सर (!) मार्टिन रीस क्यारियर; एक अंग्रेजी खगोल विज्ञानी जसले सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयहरूमा एक पछि अर्को स्तम्भ सिकाए। कतै पक्कै पनि ईथर र विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को उपयोग गर्न को संभावनाहरु सिकाइएको छैन। त्यो केवल घूस र ब्ल्याकमेलरहरूको लागि हो (संरचनात्मक बाल दुर्व्यवहारको कारण)।
उहाँ हाम्रो प्रदूषणको बारेमा मौन हुनुहुन्छ, जसले गर्दा 'ब्रह्माण्डिक विकिरण' अब खतरामा पर्न सक्छ र हामीले यसको बिरूद्ध कदम चाल्नु पर्छ। र त्यसकारण सबै प्रकारका गलत उच्च वैज्ञानिक रिपोर्टहरू संसारमा पठाइन्छ, जुन राजनीति र नगरपालिकाहरूलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ। Rees, वैसे पनि, एक टेस्ला क्लोन जस्तो देखिन्छ र तिनीहरू धारावाहिक हत्यारा विलियम हरे जस्तै देखिन्छन्, जो एडिनबर्गमा त्यस समय चिकित्सकहरूलाई लास र मृत बच्चाहरूको छानबिनका लागि प्रदान गर्थे। एडिनबर्गमा भूमिगत परिच्छेदहरू अब पर्यटकहरूले बसिरहेका छन्। कथाले भन्छ कि हेरे, जसरी अहिले एपस्टाइन, पुलिसले जेलबाट छुटेको थियो .... (माफ गर्नुहोस् मबाट)।
त्यो लुसिफर र ख्रीष्टको चीजको बारेमा; लुसिफर अनिवार्य रूपमा कारण र प्रभाव को लागि खडा छ; विश्वव्यापी दिमागमा कारण। आमा aether हो कि विश्वव्यापी दिमाग (जस्तै एक फिल्म स्क्रिनमा एक फिल्म) लाई सम्भव बनाउँछ। बच्चा भनेको तपाईको कुरा गरिरहनु भएको छ, लुसिफर जसले निश्चित कानूनहरुमा नक्कल बनाउँछ, सिमुलेशन। त्यो आमालाई टाढा राखिएको छ र गोप्य रूपमा उनीहरूका सबै इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक खेलौनाहरू र हतियारहरू, मौसम हेरफेर (हार्प) आदिको लागि 'प्रयोग' गरिएको छ।
यस हप्ता मनोवैज्ञानिकमा एउटा लेख थियो; वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए कि त्यहाँ विश्वव्यापी दिमाग हुनुपर्दछ जुन दिमागमा निर्भर हुँदैन। वास्तवमा, मस्तिष्क गतिविधि वास्तवमा यसलाई तल भिजाउँछ। त्यसकारण मस्तिष्कको कार्यलाई पक्षाघात गर्ने ड्रग्स यति आकर्षक हुन्छन्, किनभने त्यस पछि सम्पूर्ण मनको महिमा अन्ततः आउँदछ। https://www.psychologytoday.com/intl/blog/think-act-be/201908/how-is-consciousness-related-the-brain?fbclid=IwAR0SIUfeJTdELBScEKSQvzosfz_r6z7E64nrueSpp-jRNBsCFqMgwi5HZBM
तर सोडोमी, जुन 'लुसिफेरियन्स' द्वारा लागू गरिएको छ, धेरै साना बच्चाहरु संगै, पहिले नै दिमागमा भएको बदाम को दरारिन्छ; पाइनल ग्रन्थिले परिणाम स्वरूप डीएमटी उत्पन्न गर्दछ, जबकि त्यहाँ भारी आघात पनि हुन्छ। भेदित आवाज, आदि संग यी कोडिंग गरेर, तिनीहरू अल्ट्रा-दिमाग कसैलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन्।
'समलिay्गी गर्व' आजकल 'नहर अभिमान' छ जसमा शब्द 'ऐनल' हुन्छ। र Kanaal (कृत्रिम आदि) मा वा केन्ट, लंड, जे भए पनि 'C' मा।
ठूलो भिन्नता सम्पूर्ण दिमागको सचेत सक्रियतामा निहित छ, वा तपाइँ विभाजित दिमागमा धकेल्नुहुन्छ, जसमा वाम गोलार्ध अधिक उत्तेजित हुन्छ, जसरी एआईमा र वर्तमान शिक्षामा, चिकित्सा प्रयोग र समाजमा छ।
मैले धेरै रिपोर्टहरू सुनें र अनुभव गरें कि सम्पूर्ण दिमागको सक्रियता नै ख्रीष्ट कोड हो; त्यसोभए यीलाई सचेतपूर्वक सक्रिय गरेर, व्यक्ति तिनीहरूको ट्रामा कोड र दिमाग नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र हुन्छन्।
यसको मतलब यो छ कि लुसिफेरियन युनिभर्सल दिमागमा एउटा प्रोग्रामिंग प्रस्तुत गरिएको छ, जसले तपाईं सेल-दिमागमा समाहित हुँदा रोक्छ र निको पार्छ। वा क्यान्सरयुक्त सेल दिमाग।
अर्को शब्दहरूमा; त्यो हो कि लुसिफरलाई सम्पूर्ण दिमागको रूपमा बदलिएको छ (मूलबाट) क्रिष्ट-दिमागले; जसले यो सिमुलेसन बीचमा तपाइँ तपाइँको मूल पहिचान र सक्रिय गर्न जारी राख्नुहुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्दछ।
लुसिफेरियन्स (साब्बटियन्स, फ्रान्कीनिस्टहरू, इलुमिनाटी) को उद्देश्य पुरानो लुसिफरलाई पुन: निर्माण गर्नु हो र यसैले सिमुलेशनमा हावी र हेरफेर गर्नु हो। त्यो अनुकरणबाट 'यहूदी' नयाँ चुनिएकाहरू हुन्। बाँकी एक रोबोट गुलाम हुन सक्छ।
लुसिफरलाई वास्तवमा ख्रीष्टले अधिलेखित गर्दा तिनीहरू कसरी त्यसो गर्छन्?
त्यहाँ लुसिफरको अर्को पक्ष छ, हेरफेरको पक्ष जहाँ स्वतन्त्रताले आफ्नो पाठ्यक्रम लिन सक्दछ, जब सम्म यसमा कुनै ख्रीष्टको चेतना स्थापित हुँदैन। मानिसले अब यो आफैले गर्नु पर्छ। कार्यक्रम रोपण गरिएको छ, तर मानवहरूले यसलाई सचेतपूर्वक सक्रिय गर्नुपर्दछ।
लुसिफर वा डुअलको छेउछाउको तस्विर ख्रीष्ट होइन, किनकि उसले पूरै अधिलेखन गर्दछ।
उसलाई अहिमान भनिएको छ; प्रविधिको आत्माको उद्देश्यको साथ तिनीहरूको मूलका प्राणीहरू चोर्न र तिनीहरूलाई आफ्नो राज्यमा समाहित गर्ने। अर्को शब्दमा, शैतान। यो तपाईं सबै उदहारण वर्णन र वर्णन छ।
त्यसोभए तिनीहरू भौतिक कार्यक्रममा ख्रीष्टको सम्पूर्ण कार्यक्रमको अनुकरण गर्न चाहन्छन्; जस्तै हर्माफ्रोडाइट र ट्रान्सजेंडर। यसको मतलब यो हो कि तपाइँ पूरै आफ्नो मूल बाट काटिएको छ, र कुनै प्यास तिर्नु हुँदैन।
त्यसैले यो पनि सत्य हो कि जता पनि अब नूहिड कानून लागू हुन्छन्, जुन 'मार्शल कानून' लागू हुने बित्तिकै सक्रिय हुन्छन्। यी कानूनहरु बताउँछन्, र यी सबै राष्ट्रपतिहरु द्वारा हस्ताक्षर गरीन्छ, अन्तिम ट्रम्प हो; कि ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हरेकलाई मूर्तिपूजक मानिन्छ र शिर काटिएको हुन्छ !!
मेरो मतलब यसलाई आफैंमा राम्रो राख्नुहोस्। यसले सबै जोखिममा छ के देखाउँदछ।
मैले सोचे कि म त्यो समस्याको बारेमा मात्र जवाफ दिनेछु किनकि मलाई लाग्छ यसले निकास फेला पार्न अझ बढी योगदान पुर्‍याउँछ।
ख्रिष्टले त्यो बाइबलको कहीँ पनि भन्छन्; "मबाट बाहेक कोही बुबा (मूल) मा आउँदैनन्।" जुन उनले वास्तवमा भनेका थिए; अन्यथा तपाईं भर्खरै हराउनुभएको छ र तपाईं हेरफेर गर्नुहुन्छ। उनले कुनै पनि रीतिथिति, कट्टरपन्थी वा परमेश्वरको पूजाको लागि बोलेनन्, तर सम्पूर्ण दिमाग चेतनाको सम्भावनाको लागि (हृदयमा केन्द्रित, त्यहाँ दिमागमा भन्दा पनि धेरै बौद्धिक कोषहरू छन्); र सिमुलेशन बारे सचेत हुन र यसलाई सत्यको रूपमा स्वीकार गर्नको लागि होइन, तर सम्पूर्णतालाई (राज्य) लाई आशा र स्वीकार गर्न। त्यो मात्र सम्भव छ यदि तपाईंले सिमुलेसन बाहिर आफैलाई अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै र तपाईंको मर्ने प्रक्रियामा।
यो साँच्चिकै सत्य हो कि त्यहाँ धेरै जोम्बीहरू छन् जुन यताउता हिंड्न सकेनन्, किनकि उनीहरू पहिले नै जैविक हेरफेरको उत्पादन हुन् र यसैले उनीहरूले मूल भेट्टाउन सक्दैनन्, र आत्मपरीक्षणमा कुनै रुचि राख्दैनन्। तिनीहरू केवल सिक्न र प्रतिलिपि गर्न सक्छन्। तिनीहरूको आँखा धेरै फरक छन्। उनीहरूले उनीहरूको शिक्षा देख्दैनन्। यो सम्बन्धविच्छेद को बारे मा हुनेछ; जोसँग धेरै आत्मा हुँदैन उनी आँत्रै अन्हिमानिक एआईमा सामेल हुन्छन्। अरुले ख्रीष्टको कार्यक्रम सक्रिय गर्न सक्दछन्।
दिशानिर्देशको रूपमा ध्यान र हृदय केन्द्र लिएर। ध्यानमा, कार्यक्रम (फिल्म स्क्रिनमा प्रोजेक्ट गर्दै) आराम र (ख्रिष्ट) हार्ट द्वारा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। मूल
फेरि, धेरै धेरै धन्यवाद!
12 अगस्ट 2019 मा 11: 41
कृपया नोट गर्नुहोस्: 'नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी' को धार्मिक प्रतिज्ञा सजिलै अनुकरण (हालको सिमुलेशनको सिमुलेशन) द्वारा भरिन सकिन्छ। तपाईं सजीलै डिजिटल व्यक्तिलाई "लाइभ मेभ अप स्कटि" लाई "रहने योग्य ग्रह" लाई पठाउन सक्नुहुन्छ (हालको सिमुलेशन भित्र)। यसैले हामी नासा टेलिस्कोपको समाचारमा धेरै रिपोर्टहरू देख्दछौं जुन फेरि सम्भाव्य व्यवहारिक ग्रह फेला पारिएको छ, र त्यसैले एलोन मस्कको स्पेसएक्स मंगल ग्रहमा जान चाहन्छ।
12 अगस्ट 2019 मा 13: 43
नेदरल्याण्ड्समा ट्रान्सजेंडरहरू वास्तवमा कति ट्रान्सजेंडरहरू हुन् गैर-ट्रान्सजेंडर व्यक्तिहरूको तुलनामा, र के यो निश्चित जनसंख्या समूहमा निर्भर गर्दछ? के त्यहाँ कृत्रिम गर्भाधान इत्यादि आदि र ट्रान्सजेंडरको बीचमा सम्बन्ध छ?
यो कसलाई थाहा छ?
नासा आदि पक्कै पनि शत्रुताई आप्रवासी 'कुलीन' को खजाना स्किमिंग को लागी आदर्श हो।
सामान्य जनसंख्याले सबै कुरा ठीक ठान्छन्।, उत्तम दासहरू।
12 अगस्ट 2019 मा 23: 41
13 अगस्ट 2019 मा 10: 28
मैले फेला पारे कि 2015 बाट 2017 को अन्त्य सम्म ट्रान्ससेक्सुअलको संख्या 2015 को लागी अघिल्लो अवधिको तुलनामा दोब्बर भयो। के यो 2015 देखि ट्रान्ससेक्सुअल बन्न सब्सिडी दिइयो? खुशी डाक्टरहरू? ट्रान्ससेक्सुअल सम्भवतः ठूलो प्रचारको अवधि? तथ्या .्कले पनि ट्रान्ससेक्सुअल भएकाहरूको मानसिक स्थिति देखाउँदैन। धेरै नराम्रो। खैर, त्यहाँ सीबीएस तथ्या ?्कहरूमा धेरै थप त्रुटिहरू छन्? के अन्तर्निहित तथ्यहरू सीबीएस रिपोर्टको साथ सही छन्?
12 अगस्ट 2019 मा 23: 49
केवल लि supp्कको पूरक जुन तथ्या of्कहरूको केन्द्रीय ब्यूरोमा भर्खरै राखिएको छ:
त्यहाँ झूटहरू छन्
त्यहाँ धेरै ठूलो झूट छन्
र त्यहाँ तथ्या are्कहरू छन् ...
12 अगस्ट 2019 मा 13: 17
एक सामान्य व्यक्ति द्वारा जानकारी प्रवाह लामो समय सम्म राख्न सकिदैन।
तनावमा छन् कि सेल फोन संग कुटिएका आमाहरू (अझै) र बुवा (अझै)
सबै ती प्राविधिक प्रगति द्वारा अडिग रहनुहोस्। (मानवता, प्राणी र बोटबिरुवा र जनावरहरूको लागि विनाशकारी परिणामहरू पढ्नुहोस्)
एन्टी तनाव (वंचित) गोलीको साथ र तपाईंको जेबमा एक मोबाइल बाध्यता,
12 अगस्ट 2019 मा 15: 16
वास्तवमा नेल -> हेडि article लेख .. बधाई, किनकि सबैको लागि यो माध्यमबाट हेर्न महत्त्वपूर्ण छ।
यदि यस जीवनकालमा तपाईले थाहा पाउनुभएन कि सबै कुरा एक भ्रम हो (तपाईं वास्तवमा को हुनुहुन्छ?) र तपाईं आफैंलाई यो भ्रम (भौतिक ब्रह्माण्ड) संग एकताबद्ध गर्नुहुन्छ तब तपाईलाई सबै परिणामहरु (अनिवार्य खोप वा चिप, वा चिप, त्यसोभए तपाईं साँच्चिकै "डे स्जाक" हुनुहुन्छ;)
के तपाइँ निलो गोली वा रातो गोली चाहानुहुन्छ?
तटस्थ हुनुहोस्, छनौट-कम हुनुहोस्, ब्याट्री नखोच्नुहोस् र तपाईंको ऊर्जा बचत गर्नुहोस् (यसलाई दिनुभन्दा बरु!)।
त्यसो भए तपाईं साँघुरो बाटो लिन सक्नुहुनेछ ..
(स्वतन्त्रताको लागि ..;)
13 अगस्ट 2019 मा 01: 58
कहिलेकाँही यी लेखहरू पढ्दा यसले मलाई हड्ताल गर्दछ कि यो साँच्चिकै सबै यति छिटो हुन्छ। तब म गुगलमा केहि अधिक जानकारी खोज्नेछु।
यस लेखको साथमा मैले प्राथमिक विद्यालयमा बच्चाहरूको वर्तमान पुस्तालाई के सिकाउँछ भनेर सोच्न थालें। वास्तवमा, यस्तो देखिन्छ कि 2012 पछि प्राथमिक स्कूलमा यौन शिक्षा प्रदान गर्न अनिवार्य गरिएको छ। यूरोपियन दिशानिर्देश 2010 मा यसको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन, युरोपको कार्यालय द्वारा तैयार गरिएको छ।
पृष्ठ 38 बाट लर्निंग म्याट्रिक्स पढेपछि, म केवल यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छु कि यी लेनिनका शब्दहरूको अनुभूति हो: "मलाई युवावस्थाको एउटा पुस्ता दिनुहोस्, र म सम्पूर्ण विश्व परिवर्तन गर्नेछु।"
स्पोइलर चेतावनी: डब्ल्यूएचओले लर्निंग म्याट्रिक्समा वर्णन गर्दछ कि सेक्स शिक्षा उमेर कोटिबाट 0-4 वर्षबाट सुरु हुनुपर्दछ ...
13 अगस्ट 2019 मा 07: 47
यो कुनै कुराको लागि होईन जुन बाख्राको अर्थ 'सबै भन्दा ठूलो' हो।
समयको निर्माता, प्रकाशको ढिलाइ। म सबै धर्महरूमा तर माओरी संस्कृति जस्ता पुरातन संस्कृतिहरूमा उही द्विवादी रीतिथिति र शिक्षाहरू देख्छु। इजरायल = इसिस (चन्द्रमा) + रा (सूर्य वा छोरा) = एलोहीम = बिजुली।
यो पनि सम्भव छ कि बिल गेट्स र एलोन मस्क र तिनका सबै डिजिटल साथीहरू जस्तो लोसिफरले यस संसारलाई हस्तक्षेप गर्न अनुमति दिँदैन। यो सम्भव छ कि यो संसार दोहरो संसारलाई जीवित राख्न कडा रिसेट हुनेछ। यदि लुसिफर द्वन्द्वात्मक छ र उसले सकारात्मक र नकारात्मक सेनाहरू (एन्जिल्स र प्रेतहरू) छ जसलाई दुबै खुवाउनु पर्छ? यसभन्दा पहिले संसार धेरै पटक विन्दुमा पुगेको छ, र त्यो मानवजाति डीएनएको साथ टाँसियो र सबै चीज शाब्दिक र प्रतीकात्मक रूपमा सिलाईद गर्‍यो। लुसिफरले नियन्त्रण गुमाएको थियो र सबै कुरा रिसेट गर्‍यो। केवल ऊ वा उनीले गर्न सक्ने कुरा भनेको आफ्नै सिर्जना गरिएको समयको भ्रममा हो।
म Mindsupply सँग पनि सहमत छु त्यहाँ एक मात्र तरीका छ र त्यो तटस्थता हो। निलो हैन, रातो छैन, तर बीचमा साँघुरो तरीका।
वास्तवमै एक राम्रो लेख आशा छ पाठकहरूले यो लेख कति महत्त्वपूर्ण छ बुझ्दछन्!
13 अगस्ट 2019 मा 09: 19
केवल एक मात्र मार्ग तटस्थता हो? यसले लैंगिक तटस्थतालाई जनाउँछ। शब्द "तटस्थता" एक संक्रमित शब्द हो, तर एक अर्थमा यो साँचो हो कि प्रतिरोधले ध्रुवीयतालाई मजबुत गर्दछ। मेरो विचारमा तटस्थतालाई Passivity संग भ्रमित गर्नु हुँदैन।
एकमात्र तरीका यो हो कि तपाईले सिमुलेशनमा भाग लिइरहनु भएको छ (लुसिफेरियन भाइरस सिमुलेशनमा अवलोकन गर्ने खेलाडी भएको)।
त्यसोभए तपाईले देख्नुहुनेछ कि भाइरसलाई जित्न सक्नुहुन्छ, तर खेल स्तरमा छैन। यो तपाईं को हुन् सम्झन को बारे मा हो: चेतना को एक रचनात्मक रूप जुन लुसिफर भन्दा कम छैन। यसैले चेतना स्तरमा भाइरस बन्द गर्ने समय हो। यसको लागि गैर-पसिभिटी र मद्दतको आवश्यकता छ (चेतनाका रूपहरू जुन यस भाइरस सिमुलेशनको अनुभव गर्दछ) तिनीहरू कस्तो अवस्था हुन् भनेर सम्झन।
13 अगस्ट 2019 मा 10: 35
तटस्थताको अर्थ 'लि gender्ग तटस्थता' भनेको होइन (जसको अर्थ हो, नाशपातीहरूसँग स्याउहरू तुलना गर्ने), न त यसको अर्थ पारदर्शिता हो। यसबाहेक, यसको मतलब यो होइन कि तपाईंसँग समानुभूति वा भावना छैन (विपरित)। केवल यदि तपाईं तटस्थता अभ्यास गर्नुहुन्छ यदि तपाईं यी सुविधाहरू चरममा कायम राख्नुहुन्छ भने निर्दोषताको पक्ष वा छनौट नगरी।
यदि तपाईं पनि 'राम्रो' हुनुहुन्छ भने, तपाइँले 'नराम्रो' फीड गर्नुभयो र यसको ठीक उल्टो।
1 अरबपतिले धेरै घरबारविहीन / गरिब मानिसहरुको नतिजा ल्याउँछ र हरेक राम्रो कामको लागि केही नराम्रो कतै कतै हुन्छ। त्यो सन्तुलन सँधै रहन्छ .. ती लुसिफरको नियम र कानून हो (द्वैद्व)। यदि तपाईं भाग लिनुहुन्न भने तपाईंसँग बलिसहरू छन्। यसको Passivity (यसको विपरित) सँग के गर्न केहि छैन।
तटस्थ हुनु सजिलो छैन र जहिले पनि सफल हुँदैन .. तर यसको लागि प्रयास गर्दा पक्कै पनि तपाईंलाई आफ्नो उर्जालाई नदिन तपाईंलाई मद्दत गर्दछ र तपाईंलाई आध्यात्मिक तवरमा बलियो बनाउँदछ किनकि तपाईं आफैंको लागि ऊर्जा राख्नुहुन्छ। तपाईं अन्ततः लुसिफरलाई हराउन त्यो उर्जा चाहिन्छ।
मलाई विश्वास छ कि सिमुलेसनको बारेमा मात्र 'सचेत' हुनु पर्याप्त छैन। थप रूपमा, तपाईले तटस्थ पनि हुनुपर्नेछ र देखाउनुपर्नेछ कि उनीहरू अब तपाईंको उर्जा लिन सक्दैनन् (किनकि तपाईं अब खेल्दै हुनुहुन्न।)
र यदि त्यो यहाँ पोष्ट गरिएको छ भने तपाईं अन्य व्यक्तिलाई यसको बारेमा सोच्न मद्दत गर्नुहोस्।; )
13 अगस्ट 2019 मा 10: 36
तटस्थता र इन्द्रेणी को लागी मानिन्छ। यदि तपाईं आफूलाई बहकाउन अनुमति दिनुहुन्न भने, त्यसोभए तपाईं तटस्थ हुनुहुन्छ। कुरा यो हो कि मृत्यु पछि तपाईंसँग बाहिर निस्कनको लागि सही उत्तरहरू छन्।
13 अगस्ट 2019 मा 12: 30
"... कि लुसिफरले यस संसारलाई बिल गेट्स, एलोन मस्क र उनीहरूका सबै डिजिटल मित्रहरू द्वारा कब्जा गर्न अनुमति दिदैन"?
यसको विपरित, यी व्यक्तिहरू लुसिफेरियन एआईको साथ मानिस फ्यूज गर्ने प्रक्रियाको मुटुमा छन्। ती व्यक्तिले जनतालाई सडक नक्शामा (झूटा) एकलतामा राख्छन्।
13 अगस्ट 2019 मा 19: 14
यो सत्य हो कि ती नकारात्मक सेनाका लागि काम गर्छन्। के सकारात्मक सेनाले सबै चीज पुन: निर्माण गर्न सक्नेछ? रातो र निलो र कालो र सेतो।
13 अगस्ट 2019 मा 19: 22
थप रूपमा, हामी उहाँको छविमा सिर्जना गरिएका छौं। उसले आफ्नो मूल आत्मलाई पनि बिर्सेको छ, त्यसैले उसलाई तल खसालियो। यदि हामी उसको उदाहरण अनुसरण गर्छौं भने हामी पनि त्यस्तै गर्नेछौं। छनौट हाम्रो हो।
14 अगस्ट 2019 मा 07: 39
मिति म वा तपाईं विवेकी हुनुभयो!
16 अगस्ट 2019 मा 10: 18
प्रचार मेशिन चलिरहेको छ ... र एक सानो सफ्टवेयर को साथ तपाईं एक कहानी बनाउन को लागी सबै फुटेज सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ ... अझै फ्रीक?
19 अगस्ट 2019 मा 23: 04
ओह, यो केवल एक गीत हो
23 अगस्ट 2019 मा 18: 34
जन्म नियन्त्रण स्वास्थ्य बीमा द्वारा प्रतिपूर्ति गरिएको छैन। दिइएको कारण यो छ कि यो एक चिकित्सा आवश्यकता छैन। रूपान्तरण, हार्मोनहरू र ट्रान्सजेंडर व्यक्तिहरूको लागि सम्पूर्ण सर्कस अचानक यस्तो हुन्छ। र पाठ्यक्रम खोपहरू र (समलैंगिक) महिलाहरूको लागि गर्भाधान। प्लस सबै प्रकारका प्रजनन उपचार। केही व्यक्तिलाई कसैको लागि मातृत्व हेरचाहको लागि तिर्न गाह्रो लाग्छ। मलाई यस किसिमको असुविधाको लागि तिर्न धेरै गाह्रो लाग्छ; प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा किनभने यो तपाईंको स्वास्थ्य को लागी धेरै परिणामहरू हुनेछ र काम गर्न सक्दछ।
19 अक्टोबर 2019 मा 09: 42
हामी कहाँ शान्ति नाम मा अन्त भयो (जलवायु को लागी डायपरबाट ग्रेटा)
र Lgbt को लागि डायपरबाट यस भिडियोमा यस व्यक्तिलाई)
यो एक पुस्ता लिन्छ, तिनीहरू हतारमा छन्।
« जेफ्री एपस्टाइनले आफ्नो सेलमा आत्महत्या गरे (अपडेट)
इन्द्रेणीले कट्टरपन्थी धर्मको प्रतिनिधित्व गर्दछ जबकि समर्थकहरू सोच्दछन् कि उनीहरू 'विविधता र समावेशीकरण' को लागि संघर्ष गर्दैछन्। »
कुल भ्रमण: 13.778.521
1.682 अन्य सदस्यहरू सामेल हुनुहोस्